Inona avy ireo fomban'ny Mayans: fivavahana, zavakanto na toekarena | Fitsangatsanganana tanteraka
Nanao ahoana ny fomba amam-panaon'ny Maya
Louis Martinez | | ny hafa
Nanao ahoana ny fomban'ny Maya? Raha nitsidika ny faritra atsimon'i Mexico ianao ary nahita toerana toy izany Chichen Itzaao amin'ny Saikinosy Yucatanna Comalcalco, azo antoka fa efa nanontany tena tamin'ny tenanao ianao. Satria izany sivilizasiôna mesoamerikana taloha mbola manentana antsika liana be io.
Nandritra ny telo arivo taona mahery nisian'ny tantara dia nahatratra ny kolontsaina Maya fivoarana avo lenta. Izy dia afaka nanangana piramida goavambe sy fananganana hafa izay nahatanty tsara ny fandehan'ny fotoana; handamina rafitra politika saro-takarina eo ambanin'ny rafitry ny fanjakana-tanàna; hametraka tambajotra ara-barotra miaraka amin'ny faritany midadasika ary hahatratra ambaratonga manan-danja amin'ny fampandrosoana, miaraka amin'ny soratra mandroso indrindra any Amerika Afovoany. Raha te hahalala ianao hoe nanao ahoana ny fanaon'ny Maya, dia mamporisika anao izahay hanohy hamaky.
1 Nanao ahoana ny fomba amam-panaon'ny Mayana tamin'ny vanim-potoanan'ny famirapiratany farany ambony
1.1 Ny fivavahana
1.2 Lanonana Maya
1.2.1 Ny fanompoana ny cenotes
1.2.2 Ny lalao baolina, tsy azo ihodivirana rehefa miresaka momba ny fomban'ny Maya
1.2.3 Hanal Pixan, andron'ny maty
1.2.4 Asa fankasitrahana ny fijinjana
1.2.5 Fombafomba hafa
1.3 Politika sy firafitra ara-tsosialy
1.4 Ny tafika sy ny ady
1.5 Tanànan'ny Maya sy ny maritrano, ny malaza amin'ny fomban'ny Maya
1.6 Kanto Maya
1.7 Ny fiteny sy ny soratra, ilaina mba hahalalana hoe nanao ahoana ny fomba amam-panaon'ny Maya
1.8 Astronomia sy ny kalandrie Maya
1.9 Toekarena sy varotra
Nanao ahoana ny fomba amam-panaon'ny Mayana tamin'ny vanim-potoanan'ny famirapiratany farany ambony
Ny fomba tsara indrindra hanatonana ny fomba amam-panaon'ny Maya dia mifantoka amin'ny fotoana nahatongavan'ny Espaniola. Ary izany dia misy antony roa: io no dingana voarakitra an-tsoratra indrindra sy fotoana nahatratraran'io sivilizasiôna io ny fivoarana avo kokoa. Ho hitantsika ireo fomba amam-panao mandrafitra azy ireo amin'ny faritra samihafa amin'ny fiarahamonina.
Toy ny mpifanila vodirindrina aminy rehetra any Amerika Afovoany, ny Maya dia mpino Andriamanin-kafa. Anisan'ireo andriamanitr'izy ireo i Itzamna, ilay andriamanitra mpamorona izay naneho ihany koa ny cosmos sy, ny masoandro manokana. Fa izy efatra koa chaak na andriamanitry ny oram-baratra; ny Pawatun nitazona ny Tany sy ny bacab toy izany koa no nataony tamin'ny habakabaka.
Ny andriamanitra bibilava volom-borona, izay nahazo anarana samihafa arakaraka ny faritra (ohatra, tany Yucatán dia nantsoina hoe Kukulcan), Y Quetzalcoatl, andriamanitry ny fiainana. Ny Maya aza dia nanana ny bokiny masina momba ny fiandohan'ny angano an'izao tontolo izao. Izy io Popol Vuh, antsoina koa hoe ny Boky torohevitra noho ny fitahirizanao ny fahalalana ny sivilizasianao.
Etsy ankilany, ny Maya dia nanana fiheverana somary lozabe an'ireo andriamaniny. Nanome voninahitra azy ireo izy ireo tamin'ny sorona nataon'olombelona satria nino izy ireo fa izany no nanomezana sakafo sy nahafaly azy ireo. Fa, ho fanampin'izay, afaka nilaza isika fa novonoin'izy ireo mba ho lava kokoa. Nino ny Maya fa amin'ny fanomezana fiainana ny andriamanitr'izy ireo dia nanalava ny andriamaniny izy ireo.
Tsy izany ihany no antony nanolorany tena sorona. Nentina ihany koa izy ireo mangataha vokatra tsara sy ireo olana hafa mifandraika amin'izany fiasan'ny Universe toy ny vanim-potoana sy ny toetrandro.
Ary farany, na dia natao ho an'ny andriamanitra fotsiny aza ny olimpikan'izy ireo dia nanana ny lanitr'izy ireo ny Maya. ny Xibalba Io no toerana, fa na ny tsara na ny ratsy dia nankany. Arakaraka ny fihetsik'izy ireo no nitondrana azy ireo malefaka na henjana.
Mifandray akaiky amin'ny fivavahana ny fombafomban'ny Maya Maya. Tsy izany no izy tamin'ny tranga rehetra, ny sasany amin'izy ireo dia maloto. Saingy, na izany na tsy izany, ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fombafomba fanaon'izy ireo dia azo antoka fa hisarika ny sainao. Haneho anao ny sasany amin'ireo fombafomba ireo izahay.
Ny fanompoana ny cenotes
Ireo torcas na faritra amin'ny tanety karst milentika ireo dia matetika ao amin'ny saikinosy Yucatan, izay misy tanàna fizahan-tany amin'ilay antsoina hoe Riviera Maya. Ahoana ny fomba hitsidihanao azy ireo raha mandeha any amin'ilay faritra ianao, dia holazainay aminao fa, ho an'ny Mayans, ny cenotes dia Toerana masina. Izy ireo dia noheverina ho vavahady mankamin'ny ambanin'ny tany ka nanao fombafomba sy sorona tao amin'izy ireo.
Ny lalao baolina, tsy azo ihodivirana rehefa miresaka momba ny fomban'ny Maya
Hafa tanteraka ny toetran'ity tanàna ity pok to pok na lalao baolina, iray amin'ireo lanonana malaza indrindra amin'ny fomban-dry zareo. Na dia androany aza dia hitanao amin'ireo toerana arkeolojika ireo saha nanaovana azy. Saingy manan-danja lehibe koa izy io ho an'ny Maya. Tamin'ny alàlan'ny antoko misy azy ireo dia nandamina ny fifanolanana teo amin'ny tanàna izy ireo, izany hoe nanolo ny ady.
Lalao kianja filalaovana baolina any Monte Alban
Na izany aza, ireo izay very ny hatairana dia mazàna no nohanina. Noho izany, nisy olo-malaza koa io singa fombam-pivavahana. Rehefa liana ianao hahafantatra izay misy an'ity lalao ity, dia holazainay aminao fa momba ny fandefasana baolina amin'ny harato masonry nefa tsy mikasika ny tany. Ary ny sorony, ny kiho na ny valahany ihany no azony nokapohina.
Hanal Pixan, andron'ny maty
Toy ny zava-misy ankehitriny, dia nanana ny andron'ny maty ihany koa ny Maya. Fetibe io hanal pixan ary nahatsiaro ireo olon-tiana niaraka tamin'ny emboka manitra, mozika, sakafo ary lanonana hafa.
Asa fankasitrahana ny fijinjana
Mankasitraka ny fiotazana dia fihetsika iray izay hita amin'ny kolotsaina rehetra manerantany, taloha sy ankehitriny. Ny Maya dia nanana fombafomba isan-karazany ho an'ny dingana rehetra amin'ny fahavokaran'ny tany.
Miaraka amin'ny Pa Puul nangataka tamin'ny lanitra izy ireo mba handatsaka orana sy miaraka amin'ny Sac Ha nangataka ny hampivelarana ny katsaka izy ireo. Vantany vao nangonina ny vokatry ny tany, dia nisaotra azy ireo tamin'ny dihy nataon'i Nan Patch. Ho an'ity lanonana farany ity dia namorona saribakoly avy amina katsaka izy ireo, nametraka izany teo ambonin'ny alitara ary nivavaka rehefa nisotro. pinol, vita amin'ny katsaka ihany.
Farany, ny xukulen Izy io dia lanonana iray hanatonana an'i Itzamna, andriamanitra mpamorona, hangataka aminy fahasalamana sy fanambinana, raha ny Hetzmek io dia karazana lanonana fanaovana Batisa ho an'ny ankizy kely.
Politika sy firafitra ara-tsosialy
Ny Mayans dia nanana ny governemantan'ny fitondram-panjaka, na dia tena tsy mitovy amin'ny nisy ohatra, tany Espana, Angletera na Frantsa tamin'ireny fotoana ireny. Na izany aza, nisy ny fitoviana sasany. Ny mpanjakany dia noheverina ho zanak'Andriamanitra ary, noho izany, ny heriny dia avy tamin'ny andriamanitra. Mandritra izany fotoana izany dia nampihatra ny governemanta tamin'ny tanànany na faritany izy ireo ary nanao toa izany koa mpisorona.
Tempolin'i Jaguar Lehibe
Mikasika ny fiaraha-monina dia natsangana ny mpitondra na ny ambony, ankoatry ny mpanjaka tenany, nataon'ny hafa pretra manana toetra shamanic. Tena zava-dehibe ny fivavahana teo amin'ny tontolon'ny Maya ary izany no antony nananan'ny shamans fahefana lehibe. Nandray anjara tamin'ny fanapahan-kevitry ny mpanjaka aza izy ireo. Farany, ny laharana fahatelo amin'ireo mpanankarena dia ny manan-kaja, izay lova no lohateny ary nanoro hevitra ny mpanjaka koa.
Etsy ankilany, nisy ny kilasy ambany nisy ny mpiasa sy mpanompo eo akaikin'ny rohy ambany indrindra, ny MPANOMPO. Ity farany dia tsy nanana ny zony rehetra ary fananan'ny andriandahy nividy azy ireo. Ary farany, miaraka amin'ny fivoaran'ny sivilizasiôna Maya, a kilasy antonony, mandrafitra ny mpiasam-panjakana, ny mpivarotra, ny mpanao asa tanana, ary ny miaramila antonony.
Ny tafika sy ny ady
Ny ady dia nisy lanjany lehibe teo amin'ny toe-tsain'ity vahoaka alohan'ny Columbian ity. Matetika izy ireo no teo amin'izy ireo na nanohitra faritany akaiky ary ny tafika Maya dia niomana tsara sy nitondra tena fifehezana lehibe. Nisy mpikarama an'adySaingy ny lehilahy salama salama rehetra dia notakina handray anjara tamin'ny ady, ary toa hita fa nandray anjara tamin'ireny ady ireny koa ny vehivavy.
Etsy ankilany, fitaovam-piadiana ireo miaramila Maya ireo tsipìka sy zana-tsipìka. Saingy, ny ankamaroany dia ny atlatl, mpandefa zana-tsipìka, ary efa tamin'ny fotoana Espaniola, sabatra lava na greatsword. Ankoatr'izay dia nilahatra tamin'ny vatany izy ireo fiadiany vita amin'ny landihazo quilted nohamafisin'ny rano sira.
Tanànan'ny Maya sy ny maritrano, ny malaza amin'ny fomban'ny Maya
Ny tananan'ity tanàna talohan'ny Columbian ity dia tsy nokasaina hatao tandrefana. Ka, nitarina tsy ara-dalàna. Saingy, saika ny ankamaroan'izy ireo dia manana ivon-toerana voaforona tranon'ny fombafomba sy fitantanan-draharaha ary, manodidina izany, faritra fonenana maromaro izay nampiana rehefa mandeha ny fotoana.
Maro ny sarotra kokoa dia ny maritrano Maya, ka hatramin'ny nahatongavan'ity sivilizasiôna ity ho iray amin'ireo vanim-potoana nandroso indrindra tamin'ny resaka fananganana. Nanana mpiasa manokana aza izy ireo.
Nanamboatra efamira, patio, kianja ho an'ny lalao baolina izy ireo ary sacbeob na lalan-by. Fa ambonin'izay rehetra lapa, tempoly, piramida ary koa observatories. Ny ankamaroan'ireo fananganana ireo, ankoatr'izay, dia voaravaka sary hosodoko, sary vongana na tsangambato vita amin'ny stucco.
Angamba ny iray amin'ireo tranobe nahomby indrindra dia ny piramida triassic. Izy io dia misy tranobe lehibe iray misy rindrina kely roa eo amin'ny sisiny ary manatrika ny anatiny, izy rehetra dia miorina amin'ny tampon'ny fotony. Tonga izy ireo hanao refy lehibe ary mino izy ireo fa misy ifandraisany amin'ny angano an'ny tanàna.
Ny zava-kanto Maya dia manana tanjona indrindra fombafomba, na dia nandrakotra lohahevitra hafa koa aza. Vita amin'ny sary sokitra vato na hazo, sary hosodoko, vato sarobidy ary seramika izy io. Nahazo tombana manokana ho an'ny loko izy ireo maitso sy manga izay nampiasan'izy ireo matetika ny jade an'ireo feo ireo.
Etsy ankilany, amin'ny tanànany ny stelae amin'ny vato. Fa ambonin'izany rehetra izany dia voaravaka ny tarehy stucco nolokoana loko mamirapiratra. Raha ny marina, nanana ny lehibe izy ireo sary hosodoko amin'ny rindrina. Raha ny momba ny seramika, dia fantatr'izy ireo ny teknika fandrosoana voalohany tsy nanana ny kodiaran'ny tanimanga izy ireo. Noho io antony io, ny singa boribory toy ny solomaso dia novolavolaina tamin'ny teknika hafa toy ny war warping.
Ny fiteny sy ny soratra, ilaina mba hahalalana hoe nanao ahoana ny fomba amam-panaon'ny Maya
Ny faritany tsirairay amin'ity sivilizasiôna ity dia samy nanana ny fiteniny avy. Saingy, izy rehetra dia avy amin'ny fiteny iraisana antsoina hoe proto-mayan izay inoana fa teraka tany amin'ny havoanan'i Goatemalà. Toy izany koa, ny lahatsoratra voatahiry rehetra tamin'ny vanim-potoana klasik (manodidina ny taonjato faha-XNUMX talohan'i JK) dia toa nosoratana tamin'ny antsoina hoe cholti na fiteny Maya mahazatra.
Ny rafitry ny fanoratana an'ity tanàna ity dia tena zava-dehibe tokoa hahalala ny fomban'izy ireo. Ary izany dia noho ny antony roa: nahatratra haavon'ny mampiasa fitaovana arifomba ny ary, ambonin'izany rehetra izany, fantatsika izy ireo noho ireo soratra sy soratra navelany tamintsika.
Na dia misy mpikaroka mandà izany aza, ny hafa kosa manondro ity asa soratra ity ho mandroso tokoa. Ny santionany voalohany dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i JK. Fa talohan'izay dia efa nisy rafi-panoratra Mesoamerikana hafa toa ny Zapotec.
Karazana karazana fanoratana glyphic, izany hoe, miorina amin'ny hieroglyphics amin'ny endriny, ohatra, an'ny Egyptianina taloha. Handeha lalindalina kokoa, dia holazainay aminao izay ampiasainy logograms na fanehoana teny, ampiarahana famantarana syllabic. Ary efa saika voadika daholo izao.
Boky Maya Maya efatra talohan'ny Columbian no notehirizina. ny Madrid Codex dia avy amin'ny karazana divinatory ary mifototra amin'ny tzolkin na ny tsingerina masinina ho an'ity vahoaka Mesoamerikana ity. ny Dresden Codex mirakitra latabatra astronomia sy astrolojia izy io, ary koa famaritana ireo fombafomba mifandraika amin'ny taom-baovao. Ho azy, Paris Codex Heverina ho karazana boky torolàlana ho an'ny pretra Maya izy io. Ary farany, ny Codex Grolier, izay niadian-kevitra ny maha-azo itokiana azy tato ho ato, dia nohamafisiny ho marina ary misy sarin'andriamanitra.
Astronomia sy ny kalandrie Maya
Betsaka ny tombantombana momba ny fahalalana astronoma sy ny datin'ny kalandrie Maya ka ilaina ny miresaka momba azy rehetra. Marina fa ity tanàna talohan'ny Columbian ity nandinika tsara ireo vatana selestialy.
Saingy ny tanjony dia tsy ny fahalalana an'izao rehetra izao, fa nanana tanjon'ny fanandroana, divinatera. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra antsika, dia holazainay aminao fa noheverin'izy ireo fa ny alàlan'ny masoandro sy ny volana dia premonitory ny loza.
Raha ny tetiandro kosa dia nahavita ny Maya manisa taona amin'ny masoandro tsara lavitra noho ny eropeana tamin'ny androny aza. Nozarain'izy ireo ho andro na havany, isa na winai ary 360-andro taona na T. Saingy mitovy amin'izany, mifototra amin'ny tsingerina telo mifampitohy: ilay voalaza etsy ambony tzolkin, 260 andro; ny haab an'ny 365 sy ny antso kodiarana kalandrie, 52 taona.
Sary hosodoko hosodoko Maya
Toekarena sy varotra
Farany, holazainay aminao ny momba ny toekarena Maya. Mikasika ny fambolena ataon'izy ireo dia toa fantatr'izy ireo izany teknika mandroso. Nampiharin'izy ireo tao terraces sy faritra avo hafa fa nandena rano izy ireo fantsona. Anisan'ny vokatra fambolena azony, ny katsaka, mangahazo, tsaramaso lehibe, voatavo, tanamasoandro na landihazo dia tena zava-dehibe. Fa ny kakao, indrindra ireo kilasy mpitondra ao aminy, hany ka nampiasaina ho vola indraindray.
Etsy ankilany, ny Maya dia toa izany mpivarotra lehibe. Nankalazaina ireo tanàna lehibe tsena ary nanjary ivom-barotra lehibe izy ireo. Ny entana dia nentin'ny biby teny amin'ny arabe na tamin'ny sambo namakivaky ny renirano ary tonga ny faritra Mesoamerika iray manontolo. Ny entana malaza indrindra dia ny lamba, firavaka na seramika, fa koa ny vokatra avy amin'ny sakafo.
Ho famaranana, nasehonay anao nanao ahoana ny fomba amam-panaon'ny Maya, iray amin'ireo vahoaka mandroso indrindra alohan'ny Columbianina ao amin'ny kaontinanta amerikana iray manontolo. Namorona fiarahamonina liana amin'ny astronomia sy ny maritrano izy ireo, fa koa amin'ny varotra sy zava-tsarobidy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Nanao ahoana ny fomba amam-panaon'ny Maya
Mandehandeha irery sa amin'ny vondrona voarindra?